Ihe Eji Eme Akwa
Ihe Eji Eme Akwa NS GAIA bu akara ndi nwanyi ndi eji eme onu ahia nke ugbua sitere na New Delhi nke nwere otutu ihe eji eme ya. Ihe eji eme ihe a bu nnukwu onye na akwado mmadu ime ihe banyere ihe nile ma azu azu nile. Egosipụta ịdị mkpa nke ihe a na-egosi na ogidi ndị na-ede aha, 'N' na 'S' na NS GAIA kwụchitere maka Nature na Sustainability. Usoro NS GAIA bụ “ihe dịkarịsịrị nta”. Ihe ngosi a na-ekere òkè siri ike na mmeghari ejiji ngwa ngwa site n'ịhụ na mmetụta gburugburu ebe obibi pere mpe.
Ọla Ntị Akwụkwọ nkuzi Osisi Almond dị na okooko osisi nke Van Gogh dere. A na-emepụtakarị ihe ụtọ dị na ngalaba site na ụdị ụdọ dịịrị mma nke cartila, dịka alaka ndị ahụ, jiri ifufe na-efegharị. Ojiji dị iche iche nke gemstones dị iche iche, site na nke fọrọ obere ka ọ bụrụ na-acha ọcha na pink na-akawanye njọ, na-anọchi anya ndo nke ifuru. A na-anọchi anya ụyọkọ nke ifuru. Ejiri ọla edo 18, ọla edo pink, morganites, sapphires pink na pink tourmalines. Emechara ọcha na nke ederede. Ọkụ na-enweghị oke na mgbakwunye zuru oke. Nke a bụ ọbịbịa nke oge opupu ihe ubi n'ụdị ọla.
Ihe Eji Eme Akwa Ọla Ntị Akpa Aka Nchịkọta Womenswear Oge Eji Eme Ihe Nchịkọta Womenswear